Wholesale Multi-saizi zvakajeka Matte Frosted Glass Kanjera chirongo pamwe muvharo fekitari uye vagadziri | Winby
Multi-saizi yakajeka Matte Frosted Glass Kanjera chirongo chine muvharo
Yakasimba girazi yezvinhu ine yakanaka mat matema glaze, iyo yekutanga bamboo chivharo chehuni chine hwema hushoma izvo zvisingakanganise kushandiswa. Inofananidzwa nemapurasitiki, girazi rine hutano uye rakachengeteka uye nyore kushambidza. Wood chivharo uye silicone yekuisa mucherechedzo inodzivirira mweya kuti usapinda, gadzira yakavharwa nharaunda uye chengetedza zvirimo pakaoma.
Ruvara: Bvisa chando
Usage: Ivo akakodzera kugadzira kenduru, kuchengetedza ese marudzi ezviyo, kuki, shuga, tii, maamondi, kofi, furawa, zvinonhuwira uye zvimwe, kuzadzisa zvaunoda zvezuva nezuva.
1.Muchina wakaputika / wakatsikirirwa, unoshandiswa zvakanyanya muresitorendi / muhotera / kumba / pati etc.
2.Logo yakagadzirirwa, pateni, saizi uye ruvara nezvimwe zvinogona kuitwa zvinoenderana nemadhirowa ako.
3. Eco-Inoshamwaridzika uye isiri-chepfu, chikafu chakachengeteka giredhi girazi muviri. Iyo haina BPA, lead, cadmium kana chero zvimwe zvinhu zvinokuvadza kumuviri wemunhu. Yakachengeteka uye yakasimba kukisheni kurongedza inovimbisa chengetedzo kutumira.
Mune rimwe shoko, saizi 、 logo 、 ruvara inogona zvese kugadzirwa, isu zvirokwazvo tinogona kukupa iwe mhando yakanaka, mutengo wakakura uye wepamusoro-chinzvimbo mushure mekutengesa sevhisi.
Saizi D7.2cm * H9.1cm D8.2cm * H9.8cm D9cm * H11cm D10cm * H13cm
Kurema 225g 345g 420g 630g
Ruvara Ichena, nhema, pfumbu, ruvara runogona kuvezwa
Kutanga Kwazvose, isu tine iyo chitupa pasi peiyo Euro chiyero. Makenduru edu akakwana kusvika kuEurope chiyero, saka haufanire kunetseka nezvehunhu hwemakenduru edu. Zvigadzirwa zvedu zvinotumirwa kune dzakawanda nyika nenzvimbo, senge United inoti, Russia, Europe, Southeast, nezvimwewo Uye zvinogamuchirwa nevatengi kumba nekune dzimwe nyika.
Pane rimwe divi, girazi redu rekenduru rinoshandiswa nemhando yepamusoro zvigadzirwa uye eco-inoshamwaridzika magirazi, izvo zviri pachena kuti hazvisi pasi pegirazi uye hazvizokonzere kukuvadza vanhu. Kune akawanda marudzi egirazi makenduru emidziyo yesarudzo yako, sembiru girazi zvirongo, masoni zvirongo, squire girazi zvirongo, pudding girazi kenduru zvirongo, yankee maitiro girazi zvirongo, nezvimwe.
Uyezve, magirazi emakenduru egirazi anogona kuitwa akasiyana mhedzisiro, se matte, chando, yakabwinyiswa. Unogona kusarudza maitiro aunoda. Ehezve, kana iwe uchida kupurinda yako yega logo kana zvinyorwa pane iyo girazi mukombe, isu tinogona zvakare kuzviita. Iwe unongoda kuti utitumire zvigadzirwa zvako, tinogona kukupa iwe sereferensi.
Pashure: Empty matte girazi kenduru chirongo
Zvadaro: chando matte girazi isina kenduru mubati-champagne / Girinhi
Dema girazi Kenduru nechirongo
Kenduru Glass girazi nechirongo chematanda
Custom Glass Kanjera zvirongo
Empty Glass Kanjera nechirongo
akawanda-saizi akasaswa polish yegirazi kenduru midziyo
Frosted matte girazi isina kenduru mubati-champag ...
hombe yakajeka girazi kenduru zvirongo zvine bamboo muvharo